केश मु’ण्डन गरिएका व्यक्ति भारतीय नागरिक, पैसा लिएर अभिनय गरेको खु’लाशा ! – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/केश मु’ण्डन गरिएका व्यक्ति भारतीय नागरिक, पैसा लिएर अभिनय गरेको खु’लाशा !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान रामको जन्मभूमि नेपाल नै रहेको बताएको केही दिनपछि वा’णरसीमा सो घटना भएको थियो। भारतीय प्रहरीले सो भिडियो बनाएको आ’रोपमा चारजनालाई शुक्रबार पक्राउ गरेको थियो। सो प्रकरणमा शनिबार थप दुईजना पक्राउ परेको बीबीसीले जनाएको छ। सो प्रकरणका मुख्य आ’रोपी भनिएका अरुण पाठक अझै फ’रार रहेको वाणरसी प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली युवक भनिएका ती व्यक्तिको घर वा’णरसीमै रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बीबीसीसँग वा’णरसीका एपी अमित पाठकले भनेका छन्, ‘
नेपाली भनिएका व्यक्तिको घर वा’णरसीमै छ।